‘केरमेट सपना’ सँगै सकियो- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
‘केरमेट सपना’ सँगै सकियो
जेष्ठ ३१, २०७३ कान्तिपुर संवाददाता
चरिकोट — काठमाडौं उपत्यका धेरैको सपना हो, रहर हो । सुख र सपना पहिल्याउँदै यो सहर पस्नेहरूमध्ये थोरैले जित हासिल गर्छन्, धेरैले चाहिँ निराशा । अझ निम्नवर्गीय समाजका मानिसहरूका लागि काठमाडौं सहर निकै ठूलो संघर्षको भुमरी हो ।
यस्तै निम्नवर्गीय पात्रहरूले काठमाडौं पसेपछि गर्नुपर्ने संघर्षलाई समेटर तरंग सांस्कृतिक परिषद् तयार पारेको नाटक ‘केरमेट सपना’ सँगै राष्ट्रिय नाटक महोत्सव आइतबार समापन भएको छ । नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पहिलो पटक मोफसलमा गरेको महोत्सव उत्साहवद्र्धक दर्शक सहभागिताका साथ सकिएको हो ।
अन्तिम दिनको अन्तिम शोमा देखाइएको ‘केरमेट सपना’ उज्ज्वल शर्मा भण्डारीले निर्देशन गरेका हुन् । हास्यप्रधान नाटकले दर्शकलाई हँसाउँदै गम्भीर विषयवस्तुतिर लैजान्थ्यो । अभावै अभावबीच जीवन गुजार्न बाध्य मजदुरहरूको पीडा नाटकले उजागर गरेको थियो । लाल श्रेष्ठको लेखन रहेको नाटकमा राम थोकर, कुमार शाह, प्रलय चौलागाईं, लक्ष्मण थोकर, दीपज्योति थापा, साजन कुमार, लालबहादुर पौडेलले खेलेका थिए ।
पहिलो सत्रमा भने आरोहण गुरुकुल विराटनगरको प्रस्तुति ‘महादेवको सपना’ मञ्चन गरिएको थियो । प्रवीण खतिवडा निर्देशित नाटकले मिथकीय प्रस्तुति थियो । खेतीपानीमा लिप्त किसान र पृथ्वी घुम्दै हिँडेका महादेवबीचको रोचक बाजीलाई नाटकले प्रस्तुत गरेको थियो । किसान र महादेवको बाजीमा अथक मेहनतका कारण किसानले जित्छ र महादेवले हार्छन् । मेहनतको अगाडि भगवान्को पनि केही जोड चल्दैन भन्ने सन्देश बोकेको नाटकमा मिलन नेपाली, सुनीता घिमिरे, प्रयाग न्यौपाने, ममता महर्जन, मुकेश कर्ण, राजेश ठकुर, अंकिता विश्वास, रिया बुढाथोकी, भरत कार्की, विकास पराजुली, अशोक गौतमले खेलेका थिए ।
पाँचदिने महोत्सवमा विभिन्न नाट्य समूहका तर्फबाट नौ नाटक मञ्चन गरिएका थिए । ‘खुसी यसकारण लागिरहेको छ कि मोफसलमा पनि नाट्य जागरण आएछ,’ समापन समारोहमा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव गणेश रसिकले भने, ‘मुलुककै लागि यो ठूलो उपलब्धि हो ।’
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७३ १०:२१
सिपोरा चम्पादेवी डाँडामा
जेष्ठ ३१, २०७३ सुशील पौडेल
काठमाडौं — टौदहमाथि एउटा रमणीय डाँडो छ, चम्पादेवी । जहाँबाट काठमाडौं उपत्यकाका चार भन्ज्याङ एक फन्कोमा देख्न सकिन्छ । तर आइतबार भने उक्त स्थानमा दुई दृश्य देखिए ।
दृश्य १ : एक युवती डुकाटी मोन्स्टर बाइकमा पछाडि एक युवकलाई राखेर उकालो चढ्दै थिइन् । हवाई मार्ग हुँदै ड्रोन क्यामेराले दुवैलाई पछ्याइरहेको थियो । डाँडाको उचाइमा रहेको एउटा घरअघि गएर बाइक रोकियो । हातमा पेय पदार्थ बोकेका उनीहरू सुटुक्क भित्र छिरे ।
दृश्य २ : सोही युवती अर्का एक अधबैंसेलाई नै बाइकपछाडि राखेर पुन: सोही घरमा आइन् ।
सुटिङकै अर्को दृश्यमा युवतीले पुन: आफ्नै बाइकमा निर्वाणलाई राखेर सोही डाँडामा ल्याइन् । तिलचामले कपाल र झुस्स दाह्रीमा कालो पुरानो कोटसहित देखिएका ती अधबैंसे उचाइबाट काठमाडौं उपत्यका एक टकले हेर्न थाले । युवती भन्दै थिइन्, ‘यो ठाउँ मेरो मामाघर हो । यहाँ आउँदा मलाई आनन्द लाग्छ । मेरो आमा यही घरमा जन्मेकोले पनि मलाई बढी मन परेको होला ।’
अधबैंसेले पनि प्रत्युत्तरमा दृश्यावलोकन गर्दै सही थापे, ‘साँच्चै । यो ठाउँ सुन्दर रहेछ । मन पर्‍यो ।’
युवतीले कुरा काट्दै तत्काल थपिन्, ‘मलाई पनि तपाईं मान्छे मन पर्‍यो ।’
युवतीको कुरा सुनेर केही हच्किएका अधबैंसेले कुरा मोडे, ‘पर्वतको हालखबर के छ त ?’
पर्वत उही दृश्य एकमा युवतीसँग आउने युवक । दुवै दृश्यकी समान युवतीचाहिँ सिपोरा गुरुङ हुन् ।
लोकेसन र पात्र समान भए पनि माथिका दुई दृश्य एकै दिनका भने हैनन् । फिल्म ‘भुइँमान्छे’ का लागि एकै दिन खिचिएका भए पनि उक्त दृश्य फिल्ममा भने अघिपछि भएर आउनेछन् । भलिबलकी पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सिपोरा पछिल्लो समय फिल्म अभिनयमा पनि लागिरहेकी छन् । आइतबार पनि उनी निजी घुमघामका लागि नभई फिल्म ‘भुइँमान्छे’ को छायांकनका लागि सट दिइरहेकी थिइन् । पछाडि बसेका युवक सहिन प्रजापति थिए । स्नातक तहकी विद्यार्थी तथा कराँते खेलाडी निशाको भूमिकामा रहेकी सिपोराले ह्याङआउटका लागि साथी पर्वत श्रेष्ठ उर्फ सहिनलाई लिएर उकालो चढेकी थिइन् ।
‘फिल्ममा मेरो चरित्र अलिक स्पोर्टी, मल्टिट्यालेन्टेड र एड्भेन्चर रुचाउने खालको छ,’ फिल्म खेल्नका लागि ‘चुजी’ मानिने सिपोराले ‘भुइँमान्छे’ मा खेल्न राजी हुनुको मुख्य आधार प्रस्ट्याउँदै थपिन्, ‘मलाई अलि एक्सन अपिलिङ मन पर्छ । फेरि यो फिल्मको स्टोरी पनि कुल टाइपको छ । अरू फिल्मभन्दा भिन्न भएकाले पनि खेल्न मन लाग्यो ।’ युवकलाई हेभी बाइकको पछाडि राखेर ‘डेटिङ’ जाने आफ्नै चरित्रका बारेमा सिपोराले सुन्निएको हात देखाउँदै थपिन्, ‘हेर्नोस् न, अस्ति उसलाई (पर्वत) लाई बचाउन फाइट खेल्दा हातमा लागेर कस्तो दुखिरहेको छ ।’
नवराज बुढाथोकी निर्देशित ‘भुइँमान्छे’ को मूल कथा भने लास चिर्ने एक अधबैंसेमा घुमेको छ । जो दृश्य दुईका तिनै अधबैंसे हुन् । निर्वाण नामको उक्त चरित्रमा रमेश बुढाथोकीले अभिनय गरिरहेका छन् । फिल्ममा निर्वाण र निशाबीचको सम्बन्ध के हुन्छ ? एउटा लास चिर्ने अनि अर्की पढ्दै गरेकी युवती कसरी सँगै ‘डेटिङ स्पट’ आउने वातावरण मिल्यो ? प्रश्नहरू तेर्सिएपछि निर्देशक बुढाथोकीले मुसुक्क हाँस्दै भने, ‘यसैमा त फिल्म बनेको छ । जुन कुरा फिल्म हेरेपछि मात्रै थाहा हुँदा मजा आउँछ ।’ साइकोलोजिकल जानरामा आफ्नै पटकथामा ‘भुइँमान्छे’ जन्माइरहेका नवराजले चातुर्य देखाए । ३० दिनको सेड्युअलसहित सुटिङ थालेका उनी आइतबार भने १६ औं दिनमा थिए ।
फिल्ममा तीन मुख्य कलाकारबाहेक रोहिणी भट्टराई, नवीन श्रेष्ठ, तारा केसी, रामबाबु रेग्मी, बादल भट्ट लगायतको पनि अभिनय रहने बताइएको छ । रोहिणी नै फिल्मकी निर्माता पनि हुन् । फिल्मलाई विदुर पाण्डेले खिचिरहेका छन् भने यसको द्वन्द्व निर्देशन अष्ट महर्जनले गरिरहेका छन् । देवेन्द्र राईको संगीत रहेको फिल्मको कोरियोग्राफी भने कमल राईले गर्नेछन् ।
यसअघि रंगकर्मी सुनील पोखरेललाई मुख्य अभिनेतामा लिएर ‘वनफूल’ बनाएका नवराज बुढाथोकी शैली थिएटर हुँदै फिल्ममा छिरेका हुन् । उनले ‘भुइँमान्छे’ को स्क्रिनप्ले छिटो र छरितो हुनुका साथै कन्टेन्टले मास अडियन्सलाई तान्ने आशा गरेको कान्तिपुरसँग बताए । भने, ‘मान्छेको जीवनमा हरेक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि विकल्प हुन्छ । विकल्प नै नदेखेर कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजेको बुझिन्छ, तर त्यो हैन । फिल्मले बाँच्ने प्रेरणा दिन्छ ।’
फिल्मलाई दसैंपछि रिलिज गर्ने योजनासाथ यति बेला धमाधम सुटिङ भइरहेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७३ १०:१८